Ngwaahịa ndị na - emepụta ihe - China Ngwaahịa orylọ ọrụ & Ndị Na - eweta Ya - Nkebi 3
B10 Black Cubic Boron Nitride Superabrasives CBN ntụ ntụ
Black Cubic Boron Nitride Superabrasives CBN Powder B10 1. Cubic Boron Nitride Introduction CBN (cubic boron nitride) superabrasive nwere oke ike na nguzogide okpomọkụ dị elu, okpukpu anọ nke nke abrasive ọdịnala na-eguzogide akwa, ma nwee oke nrụpụta ọkụ. A na-eji CBN eme ihe n'ụzọ na-egweri ahịa n'ahịa, site na aerospace superalloys na spraying thermal na ígwè siri ike na-arụ ọrụ ụgbọala na ụlọ ọrụ gia iji melite arụmọrụ ...
Nickle ntekwasa Sịntetik Diamond ntụ ntụ
Ntekwasa Diamond Nickle ntekwasa Synthetic Diamond Powder 1. ntekwasa Diamond Okwu Mmalite The ntekwasa diamond, nwere ike ike metallurgical adhesion n'etiti Ti na matriks, mma n'ibu nkekọ nke diamond na nkekọ matriks. Ihe a na-etinye nwere ike ikewapụ diamond sitere na oxygen iji gbochie diamond ahụ oxidized n'ihi oke okpomọkụ, nke nwere ike melite njirimara njigide igwe nke diamond, ma melite ikpo ọkụ na ndụ polishing. 2. Ndị ...
MBD4 Fine Size Metal Bond Synthetic Diamond Powder 80 / 100-325 / 400 Mesh Size
SND-G20 Fine Size Metal Bond Synthetic Diamond Powder 80 / 100-325 / 400 Mesh Size 1. Synthetic Industrial Diamond Powder Introduction 2. Character of SND-G20 SND-G20 bụ sịntetik ulo oru diamond ntụ ntụ na a mix nke mgbe na angular kristal, ike-ọkara-ala ike na blocky ekara kristal. Okwesiri maka itinye ngwa oru diamond di elu. 3. Fine Size Sịntetik Diamond Dị Size 80/100 100/120 120/140 140/170 170/200 200/230 230/270 270/325 325/400 SND-G20 ...
MBD8 ntupu Size 80 / 100-325 / 400 Metal Bond Diamond Powder N'ihi egweri polishing Lapping
SND-G40 ntupu Size 80 / 100-325 / 400 Metal Bond Diamond Powder For GRinging Polishing Lapping 1. Synthetic Industrial Diamond Powder Introduction 2. Character of SND-G40 Diamond with semi-blocky crystals with angular shapes and medium high solid, good high nkwụsi ike okpomọkụ na nguzogide mmetụta. Zuru oke maka ngwa ebe ịchọrọ nkụda kristal gị iji mezuo ọrụ gị mana ka ịchọrọ ịgbatị ndụ. Etinyere ime ka egweri & abrasiv ...
MBD10 High Tough Fine Size Diamond Powder Maka Requchọ Ogologo Ndụ Ndụ
SND-G60 High Toughine Fine Size Diamond Powder For Require Long Diamond Life 1. Synthetic Industrial Diamond Powder Introduction 2. Character of SND-G60 Equivlant to MBD10, ụfọdụ nke ụdị cubooctahedral, nnukwu mmetụta ike na nkwụsi ike ọkụ. Etinyere na ọnọdụ chọrọ nnukwu egweri ọnụego, dị ka electroplated ngwaọrụ Mike na Polish nkume, ceramik, iko, na magnetik ihe, wdg 3. Ntupu Size Diamond Speicication SND-G20, 80 / 100-325 / 400 S ...
Titanium Ti ntekwasa Sịntetik Diamond ntụ ntụ
Titanium Ti ntekwasa Synthetic Diamond Powder 1. ntekwasa Diamond Okwu Mmalite The ntekwasa diamond, nwere ike ike na metallurgical adhesion n'etiti Ti na matriks, mma n'ibu nkekọ nke diamond na nkekọ matriks. Ihe a na-etinye nwere ike ikewapụ diamond sitere na oxygen iji gbochie diamond ahụ oxidized n'ihi oke okpomọkụ, nke nwere ike melite njirimara njigide igwe nke diamond, ma melite ikpo ọkụ na ndụ polishing. 2. The Feat ...
B20 Black Cubic Boron Nitride CBN Powder For Bụrụ Njikọ
B20 Black Cubic Boron Nitride CBN Powder For Brified Bond 1. Cubic Boron Nitride Introduction CBN (cubic boron nitride) superabrasive nwere oke ike na nguzogide okpomọkụ dị elu, okpukpu anọ nke nke abrasive ọdịnala na-eguzogide akwa, ma nwee oke nrụpụta ọkụ. A na-ejikarị CBN eme ihe n'ahịa na-egweri ihe, site na aerospace superalloys na spraying thermal na ígwè obi tara mmiri na-arụ ọrụ ụgbọala na ụlọ ọrụ gia iji melite arụmọrụ na g ...